Gbaa mbọ hụ na nchekwa nke ngwaahịa na ọrụ - China Kingswel Machinery
Ebe ọ bụ na ọhụrụ coronavirus dajụọ na China, ruo ọchịchị ngalaba, ala ndị nkịtị, anyị na-Kingswel Machinery n'ógbè niile na-ejegharị nke ndụ, ihe niile na-etoju nke nkeji na-ifịk ifịk na-ewere ihe ime a ezigbo ọrụ nke ọrịa igbochi na ịchịkwa ọrụ.
Ọ bụ ezie na anyị factory adịghị na isi ebe - Wuhan, ma anyị ka na-adịghị-ejighị ya kpọrọ, na oge mbụ na-eme ihe. On January 27, anyị na-eme ka ihe mberede mgbochi na-edu ndú otu na mberede omume otu, mgbe ahụ, ụlọ ọrụ mmepụta ihe ọrịa mgbochi ọrụ ngwa ngwa na n'ụzọ dị irè ghọrọ arụmọrụ. Anyị ozugbo tọhapụrụ anya maka akasiaha na anyị ukara website, QQ otu, WeChat otu, WeChat Official Account, na ụlọ ọrụ ozi na iwu n'elu ikpo okwu. Na oge mbụ anyị wepụtara mgbochi nke nchụàjà coronavirus oyi baa na resumption nke na-arụ ọrụ yiri ihe ọmụma, na-ekele onye ọ bụla nwoke ọnọdụ ahụ na akasiaha na n'obodo gị. N'ime a ụbọchị, anyị na-agwụ agwụ ọnụ ọgụgụ nke bụ onye hapụrụ ha n'obodo n'oge opupu Festival ezumike.
N'ihi ya, anya, onye ọ bụla nke si-nke-ọrụ pesonel lelela hụrụ otu bụrụ na nke a ọrịa na ahụ ọkụ na ụkwara. Gasịrị, anyị ga-erube nnọọ na-eso chọrọ nke ọchịchị ngalaba na ọrịa mgbochi ìgwè iji nyochaa nloghachi nke pesonel iji hụ na igbochi na ịchịkwa ebe.
Anyị factory zụrụ a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ọgwụ masks, disinfectants, infrared ọnụ ọgụgụ thermometers, wdg, na malitere mbụ ogbe nke factory pesonel nnyocha ma na-anwale-arụ ọrụ, mgbe disinfected niile-gburugburu ugboro abụọ n'ụbọchị na mmepụta na mmepe ngalaba na osisi itieutom .
Ọ bụ ezie na ọ dịghị mgbaàmà nke akasiaha hụrụ anyị factory, anyị ka na-niile na-gburugburu igbochi na ịchịkwa, iji hụ na nchekwa nke anyị na ngwaahịa, iji hụ na nchekwa nke ọrụ.
Dị ka WHO ihu ọha ozi, na nchịkọta si China agaghị ebu virus. Nke a akasiaha ga-emetụta ndị na-ebupụ nke cross-ókè ibu, otú i nwere ike dị nnọọ obi ike na-enweta nke kacha mma na ngwaahịa si China, na anyị ga-anọgide na-enye gị na nke kacha mma mma mgbe-sales ọrụ.
N'ikpeazụ, m ga-achọ ekele anyị ndị mba ọzọ ndị ahịa na ndị enyi mgbe nile na-elekọta banyere anyị. Ke ama akasiaha, ọtụtụ ndị agadi ahịa kọntaktị anyị maka oge mbụ, ịjụ ajụjụ, na-elekọta banyere anyị ugbu a ọnọdụ. Ebe a, ihe niile na-arụ ọrụ nke Kingswel Machinery ga-achọ igosi na anyị kasị nwee obi eziokwu ekele gị!